Masar: Xilal Loogu Baaqay Islaamiyiinta
Ra’iisul-wasaaraha KMG ah ee Masar Hazem El-Biblawi, ayaa bilaabay howshii uu ku soo dhisi lahaa golohiisa wasiirada, waxaana warbaahinta dowladdu ay sheegtay in ra’iisul-wasaaruhu uu qosheynayo in dowladdiisa uu ku soo daro xubno ka tirsan Ikhwaanul-Muslimiinka iyo xisbiga isalaamiga ah ee Al-Nour.
Hogaamiyayaasha KMG ah ee Masar ayaa dadajinaya hanaankii lagu soo diyaarin lahaa dastuur cusub iyo qabashada doorashada madaxweynaha iyo baarlamaan cusub.
Ururka Ikhwaanka iyo Xisbiga Al-nuur ayaa qeyb ka ah kooxo dhaleeceeyey qorshaha kala guurka ah kaasi oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha KMG ah Adly Mansour ka dib markii ay milaterigu talada xoog ugala wareegeen Madaxweyne Maxamed Mursi.
Kooxda libaraalka ah ee National Salvation Front ayaa sheegay Arbacadan maanta ah in aan lagala tashan qorshaha wax lagu soo dhisayo ayna diidan yihiin qodobo ka mid ah qoshaha kala guurka. Kooxda Tamarud ee dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ayaa sidoo kale sheegay inaan lagala tashan sida wax loo wado, waxaana labadan kooxood ay qosheynayaan inay soo jeediyaan in wax laga badalo hanaanka kala guurka.
Ururka Iskhwaanul-Muslimiin ayaa ka soo horjeestay DKMG ah waxa ayna dalbanayaan in Madaxweyne Mursi dib loogu soo celiyo. Afhayeen u hadlay kooxda ayaa sheegay Arbacadan maanta inay diideen ka mid noqoshada dhismaha xukuumadda cusub..
Afhayeen u hadashay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Jen Psaki ayaa sheegtay Talaadadii shalay in Mareykanku xiriir la sameeyeen Ururka Ikhwaanul-Muslimiinka ayna ku dhiiri-galiyeen inay ka qeyb qaataan hanaanka looga gudbayo kalaguurka.
Xiisadda Siyaasadeed ee Masar